346-362 Lakeshore Road West, Lot 1, Oakville, KuL6k 1g1
Real Estate Listings: » Residential homes » CA » Manitoba » Oakville » 346-362 Lakeshore Road West, Lot 1, Oakville, KuL6k 1g11
Njengoba icishe ibe ngamahektare ayi-10 empahla ebheke eLake Ontario, le ngqophamlando yomlando, i-Circa 1920, ngokungangabazeki ingenye yezentuthuko zokugcina ezisezitolo zase-Oakville. Ukunikeza ngokuthula ama-Oaks amadala kanye nokushesha kwedolobha, lesi siqephu somhlaba esibaluleke kakhulu simele kokubili okwedlule nokukhuthazayo ikusasa elaziwa namuhla njenge-Oak & Lake. I-Oak neLake ngokwemvelo kuyithuba elisebunyeni, elitholakala kuphela ngokunikezwa kwalo okulinganiselwe. Amasayithi asekhaya ayi-18 afiselekayo, alungele ukwakheka kwakho ngokwezifiso. Ngamunye w / 100 'wefa langaphambili *, efaka i-cul-de-sac ethule, eholela ekukhanyeni ukubukwa kobubanzi bamanzi nesakhiwo sodumo saseToronto. Uma sesiphothuliwe, ngokungangabazeki i-enclave izokhombisa ukunethezeka okungaphelelwa yisikhathi, omele indawo eseduze kanye nesifiso sayo sabangaphansi. Ukungena ngamasango ayo ungene endaweni ehlotshiswe izihlahla ezinhle kakhulu, umuntu angakubheka kalula ukuxhumana kwale ndawo kokunethezeka kwansuku zonke nokunethezeka. I-Appleby College, esinye sezikole ezizimele ezihlonishwa kakhulu eCanada, ngokwesibonelo, uhamba ibanga ukusuka e-Oak & Lake. Njengoba kunjalo i-YMCA, iFortinos nezitolo ezithandekayo nezinsizakalo zeDowntown Oakville & Kerr Village. Ngaphakathi kwebanga lokushayela lemizuzu engu-5, umuntu uzothola i-Oakville Center for the Performing Arts, Glen Abbey, Oakville & Bronte Marinas nokufinyelela iQEW. Le indawo ekahle yabagibeli abakhulu, izikhathi ezisuka emgwaqeni omkhulu, kalula phakathi kwe-Oakville neBronte GO Iziteshi Zezitimela nemizuzu nje engama-30 ukusuka ePearson International Airport. <0.5Izici Ezinomthelela Wendawo: Umtapo Wezincwadi, iMajor Highway, Izithuthi Zomphakathi, Indawo Ethulile, IzikoleImisebenzi: kaMasipala kuya kuLot Line, Street LightsSewer: Sewer (Municipal) Uhlobo Lomhlabathi: Okunye (bheka amazwi) Umthombo Wamanzi: Umasipala